Sleepra ole ka m chọrọ ịgba ígwè? - Cygba Ígwè
Isi > Cygba Ígwè > Linggba ịnyịnya ụra - azịza dị mfe maka ajụjụ
Linggba ịnyịnya ụra - azịza dị mfe maka ajụjụ
Sleepra ole ka m chọrọ ịgba ígwè?
Agba nke mbụ site naEmekana-ewe ihe dịka 90 nkeji iji wuchaa, na ndị okenyemkpaiji wuchaa ma ọ dịkarịa ala anọ ma ọ bụ iseoge ụrakwa abalị, ma ọ bụ 6 ruo 9 ngụkọta awa nkehie ụra.Sep 30 2016
Ọtụtụ mmadụ. Ekwenyesiri m ike na m lere ịnyịnya ígwè ma chee na ọ bụghị naanị na ọ ga-adị jụụ, mana ọ ga-abụkwara gị nsogbu. Know mara - na-ebute mmebi, ihe mgbu, ụfụ na, n'ime ụmụ nwoke, ikekwe nrụrụ erectile, ikekwe ọrịa cancer prostate.
Ma ọtụtụ n’ime anyị na-agba ịnyịnya ígwè ma anyị enweghị nsogbu ọ bụla. Somefọdụ ndị na-agba ịnyịnya ígwè, n'aka nke ọzọ, na-eme ya. Emere m ya ka m nwee ike ịgwa gị na mgbe ihe mere na ọ na-enye nsogbu.
Lee - nke a bụ 'chi m! My amụ amụ kpamkpam! 'Anyị ga-alaghachi na nke a ka anyị na-enyocha okwu gbasara ahụike ụmụ nwoke na ịgba ịnyịnya ígwè ha. Ọ bụ ya mere anyị ji soro otu n'ime ndị isi urologists ebe a na UK - nwoke aha ya bụ Anthony Koupparis - inye ndụmọdụ siri ike ma baa uru nke ụmụ nwoke niile na-agba ịnyịnya ígwè kwesịrị ị listena ntị na mgbe ịchọrọ ihe kpatara ọzọ karịa ahụmịhe ahụike dị ukwuu iji kwere ihe ọ sị na ya onwe ya bụkwa nwoke nwoke ndị ikom a na-anọkarị ọdụ na sadulu. Tupu anyị amalite ọ bụ ezie, lee nkuzi ihe ngwa ngwa.
Nke ahụ bụ m otú m si agba ịnyịnya ígwè m. Nke a bụ ugbu a ọkpọ na-agba ịnyịnya ígwè na na mere bụ nso-nke a amụ.
Ga-ama, ejiri m n’aka na mgbe ị na-agba ịnyịnya amụ gị na testicles na-ezokarị ezo.Ebe a na-akpọ akụkụ anụ ahụ dị nro n’agbata gị na testicles gị bụ perineum, yana mgbe ị nọ n’elu igwe kwụ otu ebe, mpaghara a bụ na kọntaktị gị na sadulu gị. N'okpuru anụ ahụ bụ urethra gị, nke bụ ọkpọkọ na-ejikọ eriri afo gị na ụwa dị n'èzí site na amụ.
The perineum bụkwa n'ụlọ ka nnukwu arịa ọbara na gị pudendal akwara, nke na-enye mmetụta nke ebe ya mere na-enye aka na erection. N'elu perineum bụ prostate gị, gland nke na -emepụta mmiri ọmụmụ na ị gafere urethra. N'iburu anatomi anyị na ọdịdị nke ihe ahụ, ọ dị ka ọ bụ ihe ezi uche dị na ya ịme njikọ n'etiti ịgba ịnyịnya na ihe mgbu ma ọ bụ nhụjuanya, nrụrụ erectile na nsogbu prostate, mana ka anyị leruo ya anya.
Ma, echegbula. O nweghi ihe doro anya karịa ihe ị hụburu, ha tụrụ aro ka Anthony kwụsị okwu a. Yabụ anyị nwere ọnụọgụ, nrụrụ erectile yana ọrịa kansa prostate, ọkachasị kansa prostate.
Ọ dị m ka anyị matara onwe anyị nke ọma ịgwa m banyere ya. Ọ bụ mgbe m nọ n'ọdụ ụgbọ elu ikuku na Indianapolis na anyị na-eme nyocha oghere ikuku, n'ọnọdụ nke ị ga-eji nwayọ nọdụ ala na igwe kwụ otu ebe ruo nkeji iri atọ ebe igwe kwụ otu ebe na-ekpochapụ ikuku ikuku. Ihe ọ pụtara Ọ ga-abụrịrị na ị naghị emegharị ahụ gị elu, n'ihi na ụdị nchagharị ọ bụla ga-agbagọ nsonaazụ ahụ.
Yabụ na ọ bụ ọnọdụ amamịghe na-agba ịnyịnya igwe kwụ otu ebe na mgbe 30 nkeji m rutere ma achọpụtara m ngwa ngwa na enweghị m mmetụta na amụ m, nke na-aga n'ihu, n'ihi na ọ dabara na ị maara na mmetụta ahụ alaghachila. Ya mere na njedebe m chere na ọ dịghị ihe dị ogologo oge mere, mana gịnị na-eme n'oge na-adịghị anya? N'ụzọ bụ isi n'ihi nrụgide ị na-etinye ozugbo na perineum, ị na-agbanye akwara ma ị na-agbanye ụfọdụ arịa ọbara na nke ahụ bụ ihe na-akpata ụfụ. Mgbe oge ụfọdụ nọdụrụ ala na akwara, ọ ga-ewe obere mmebi nke na-abụghị mmebi ogologo oge, ọ na-ebute isi ike na mpaghara ọ na-elekọta, nke bụ ihe mere gị.
cycmụ nwanyị na-agba ịnyịnya ígwè
Ya mere, ọ bụ ụdị nke ịrahụ ụra na ọnọdụ dị iche ma na-eteta na ogwe aka gị kpamkpam nwụrụ anwụ na ọ na-agwụ ike, mana mmetụta na-alaghachi ngwa ngwa na enweghị mmebi ogologo oge. Yiri nnọọ na nke ahụ ziri ezi. Ya mere, gịnị ka anyị kwesịrị ime mgbe ahụ? Ọ bụrụ na anyị na-arịa ọrịa ntị chiri mgbe anyị nyara ịnyịnya ígwè, gịnị bụ ọdụ ụgbọ mmiri nke mbụ? Ọ bụrụ n'ịchọta na nke a ga-eme, banye igwe kwụ otu ebe na ọ ga-ada ụda mgbe e mesịrị.
Amaara m karịa m, ị ga-enweta ezigbo igwe kwụ otu ebe na mmadụ ga-ele oche gị anya yana ihe niile so ya. Ugbu a ọ bụrụ na ị banye igwe kwụ otu ebe gị ogologo oge na oge ọ bụla ọ na-ada ụda na mpaghara ahụ ma ọ na-ada ụda ma mgbe ahụ ị na-eme otu ihe ahụ karịa mgbe ahụ ị ga-enwerịrị ike ibute mbibi ogologo oge mana ọgụgụ isi na-ewe ma ozugbo ọ na-enweta nnabata igwe kwesiri. Otu oge ọgbụgba mgbe nke ahụ gasịrị agaghị emebi mmetụta dị na mpaghara a ma ọ bụ nrụpụta ọ bụla na ihe yiri ya ogologo oge.
Isiokwu ọzọ mgbe ahụ ga-abụ nrụrụ erectile na site na ihe anyị nụrụ banyere nro, enwere njikọ mgbe ahụ n'etiti ịgba ígwè, ọnụọgụ ugboro ugboro na-eduga na nrụrụ erectile? - azịza ya bụ mba. Ihe ka mkpa bụ mkpa ọ dị nrụrụ erectile na mbu. Usoro ndị na - eduga na nsogbu nrụrụ bụ otu ihe ahụ na usoro nke na - ebute ọrịa obi, nke na - eduga na nkụchi obi.
Yabụ ọ bụrụ na ị nwere ọrịa shuga, ọbara mgbali elu, ma ọ bụ anwụrụ ọkụ, ikekwe ị nwere nrụrụ erectile, mana ị nwekwara ike ịrịa ọrịa obi. Nke bụ eziokwu bụ na ọtụtụ ndị toro eto ga-amalite ịgba ịnyịnya ígwè. Ọ bụrụ na ị bụ ugbu a onye na-agba ịnyịnya ígwè ma na ị nọ n'afọ ndụ ahụ na-etolite arụ ọrụ erectile, ihe mbụ ị chere ekwesịghị ịbụ, 'Oh, nke a bụ sadulu m' naanị n'ihi ịgba ịnyịnya ígwè. 'Okwesiri ibu, Agaghị m etinye isi m na ájá n'ihi na ọ rapaara Nke a nwere ike ịbụ ihe ngosi nke ihe na-adịghị achọpụta.
Achọrọ m ka m chọpụta nke a ụdị mmebi ahụ gị na akwara nke ga - eduga na nrụrụ erectile. Yabụ kedu ihe siri ike ime nke ahụ? Mmetụta dị ịtụnanya na-emetụta perineum gị agaghị enye gị nrụrụ erectile. Ma n'eziokwu ọ gaghị enye gị nrụrụ erectile.
Gaa ma lelee ya. Nke mbụ, iji nweta MOT kwesịrị ekwesị site n'echiche nke obi, gịnị kpatara na ị gaghị enwe ọgwụgwọ nrụrụ erectile? Echere m, okirikiri ezuola. O meela ka ị bụrụ ntakịrị ihe na-adịghị mma na ezigbo nsogbu ahụike ị nwere ike ịhazi ya.
Na mgbe ahụ ị ga-ahụ ha. Kedụ banyere nsogbu metụtara prostate na ọrịa prostate ọkachasị. N'ụzọ dị mma, ịgba ịnyịnya ígwè enweghị mmetụta na ọrịa cancer prostate.
Ma, ọbụghị otu ọrịa kansa prostate si amalite, ọ bụkwa ajụjụ ma a na-enyocha gị maka ọrịa kansa prostate n'ụzọ na-ezighi ezi. Otu n'ime ihe ndị anyị ji enye ihe ngosipụta nke ọrịa Ọrịa prostate bụ ịnwale ule ọbara ma enwere echiche na ọ bụrụ na ị na-agba ịnyịnya ígwè ọtụtụ ị nwere ike iwe iwe prostate gị na nke a nwere ike ịbụ nyocha ọbara gị nke a na-eji dị ka PSA Artificially bulie nnwale ọbara Nnwale antigen a na-ahụ maka prostate nke na-erute isi test mere ule ọbara a Ọ dị elu nke ọma wee nwee usoro nyocha niile ị chọghị n'ihi na ị na-agba ịnyịnya ígwè na nke ahụ abụghị eziokwu Ọ bụghị ya - enwere Ohere ọ nwere ike emetụta ntakịrị, mana ọ bụrụ na ị lelee nyocha nyocha nke ụlọ nyocha na ọtụtụ, ọtụtụ akara nrịba akwara maka ọrịa cancer prostate, ịgba ígwè na mmega ahụ enweghị ihe dị iche na nke ọ bụla na-egosi ọrịa cancer prostate, yabụ ịgba ịnyịnya ibu dị mma, ọ na-eme ị kwesịrị, ọ na - eme ka ahụike gị na - arịa ọrịa obi ihe niile na - ebelata ihe egwu gị nke kansa yana ihe ndị ọzọ anaghị emetụta nyocha ọrịa kansa prostate na - ekwesịghị ekwesị. Ma na ọ na-aga n'ihu.
N'ụzọ dị mma, enweghi nnukwu ihe ize ndụ nke ọrịa cancer prostate. Ihe anyị kwesịrị ime dị ka ụmụ okorobịa na-eche banyere ya. Yabụ ka anyị na-eto, o yikarịrị ka anyị ga-arịa ọrịa kansa prostate.
Ya mere, nke mbụ bụ ugbu a ịmara ụfọdụ mgbaàmà ahụ, ihe ndị anyị na-ele anya bụ ihe dịka mgbaàmà ọrụ mmiri, mgbu azụ, nsogbu ọbara ọgbụgba na mmiri, ihe ndị a na-echekwa ihe ndị ahụ Mgbe ahụ ị ga-agakwuru onye urologist ma ọ bụ dọkịta ezinụlọ ma nwee mkparịta ụka ezi uche dị na ya na-eduga nyocha ahụ. Ọ pụtaghị na a ga-enyocha gị maka ọrịa kansa prostate, mana dọkịta ahụ ga - ejegharị gị gabiga ihe ọma nke ule na ikekwe ọghọm nke ule. Mbufo mbiba ẹkeme ndibiere m̀m to ikpakaha m̀m or ididaha.
Achọghị m ka ụmụ okorobịa leghara ya anya na nke mbụ. Maka ọtụtụ akụkụ, anyị na-achọta ihe ndị a tupu ụbọchị ndị a ma enwere ike ịhazi ya kpamkpam. Kedu afọ anyị na-ekwu maka ebe a? Kedu afọ ị kwesịrị ichegbu onwe gị? Enwere m ekele na enwere ike bụrụ ihe atụ dị egwu nke oge mbụ ị maara, mana ị ziri ezi.
Ya mere, na nke m na omume m, enwere m foto gbagọrọ agbagọ. Ya mere, anyị nwere nnukwu ọrụ dị otú a na ị ga-enwe ndị ọrịa site na 30 ruo 80 na 90s na-eche banyere ya, ma ọ bụrụ na ị nwere ihe mgbaàmà ọ bụla na-echegbu onwe gị, atụla ụjọ, etinyela isi na ájá ma duzie na nyocha nke ihe nsogbu bụ, ọ bụrụ na enwere ọkọlọtọ ọ bụla na-acha uhie uhie ime ihe ma ọ bụrụ na ịchọrọ ha Ya mere enweghị njikọ dị n'etiti ịgba ígwè na ọrịa cancer prostate, mana ọrịa prostate bụ nnukwu nsogbu maka nnukwu akụkụ nke ndị na-agba ịnyịnya nanị n'ihi na ha ' ụmụ nwoke, ha dị afọ iri na ụma wee chebara ya echiche Ọfụma, amaghị m maka gị, mana ihe kachasị m mkpa site na mkparịta ụka a mụ na Anthony bụ na anyị nwere ike ghara iji ahụike anyị gwurie egwu, anyị kwesịrị na-eche ihu ịnwụ anwụ ma na-achọ enyemaka mgbe anyị chọrọ ya n'ihi na anyị anaghị adị gs bụ eziokwu n'eziokwu, nsogbu kasịnụ anyị ga-eche ihu. Ugbu a, enwere m ike ịfefe ọtụtụ ihe ọmụma mgbe m na-agwa gị gbasara mpempe akwụkwọ m na-atụ n'okporo ụzọ ifufe mana echere m na ihe edeturu ma eleghị anya anyị niile ga-anwa mkparịta ụka ma eleghị anya ndị enyi anyị na klọb ndị na-agba ya na ngwụcha izu a. nwere obere nkata banyere isiokwu a echere m na nke ahụ ga-abụ ebe dị mma ịmalite.
Ugbu a kwa, biko jide n'aka na ọ na-enye m nnukwu mkpịsị aka iji kelee Anthony maka oge ya na ịkọrọ anyị ahụmịhe ya dị egwu, yana ọ bụrụ n'ịchọrọ ịhụ edemede ọzọ n'otu isiokwu ahụ. Naanị anyị nwere otu na ọwa a ga - enyere gị aka ịzụta ihe ziri ezi maka ị ga - eche nsogbu mbụ nke ntị chiri ihu.
Youkwesịrị ịrahụ ụra na nkeji iri itoolu?
“E nwere echiche onye ọ bụla na-ehi ụra90-nkeji ogema nke ahụ bụ nkezi, ọ bụghị iwu, ”ka Winter na-ekwu. “Nke ahụ pụtara gị REMokirikirinwere ike ịdị ogologo ma ọ bụ karịa karịaNkeji 90. Ya meregịekwesịghị ịdị kagịM ga-eteta na-enwe mmetụta eweghachiri ma ọ bụrụ nagịkulie iseNkejiemechaa ma ọ bụ tupu oge eruo. ” Phew.Ọkt 16 2018
Ya mere, n'usoro ajụjụ ọnụ a, anyị ga-achọ ịgba ajụjụ ọnụ Nick Littlehales, ọkachamara a ma ama n'ụwa niile na-enye ọzụzụ maka ụra maka ndị egwuregwu kachasị elu, kpuchie isiokwu ụfọdụ, mgbe niile na nyocha 5 nkeji na nke ọ bụla ị kwesịrị ịmụ ihe banyere ụra gị na otu ị si nwere ike ime ka ụra gị ka mma. Ya mere nọrọ na-ege ntị ma na-ehi ụra nke ọma.
Ndewo Nick, daalụ maka ịnọ ebe ahụ iji zaa ndị ahịa anyị. Jụọ Hanno. Ọ dị mma ịnọnyere gị.
Nke mbụ, m ga-ekwu na ndị mmadụ na-ajụ anyị ihe kpatara anyị ji nwee mmekọrịta chiri anya karị na anyị, anyị na-ekwukwa na ọ bụ maka ịmara gị na otu ị si azụ ndị mmadụ ka mmadụ niile nwee ike ịgbaso echiche gị ma gị onwe gị na mbipụta gị akwụkwọ 'Ihi ụra' na-enye echiche dị ịtụnanya nke otu ị ga - esi melite ụra gị na nkeji oge 90. Nwere ike ịgwa anyị ntakịrị ihe banyere ya? Ee, ọ bụrụ n ’ịnọ n’ ụlọọgwụ, Hanno, imirikiti ndị dibịa ga-atụle oge nke 90 iji lelee ụzọ dị iche iche ụra. Ma jiri ya tụnyere nke ọzọ 90 nkeji.
Ya mere cycles ise nkeji 90 kwekọrọ na awa 7.5. Nke a bụ ihe ọtụtụ n’ime anyị na-eche mgbe anyị chere maka ụdị ụra anyị kwesịrị ịra kwa ụbọchị, ihe dịka elekere asatọ.
Mana ihe ọ na-enye bụ ohere imebi ụbọchị 24 nke awa n’ime nkeji 90, nke na-enye oge anaghị ehi ụra na oge ụra, obere ezumike, ọ na-enyekwa ohere ịchọta ụzọ anyị na-adị kwa ụbọchị. Ihe ọzọ m mụtara n’akwụkwọ gị, nke kachasị mkpa ị nyere anyị bụ ibili n’otu oge kwa ụbọchị. Gịnị mere o ji dị anyị mkpa? Echere m na ka m na-enyocha ụra kemgbe ọtụtụ afọ, ya mere, ikwu okwu, a na m ahụkarị usoro a nke a na - akpọ circadian rhythm: anyanwụ na - abịa ma anyanwụ na - ada.
Nke ahụ na-eme kwa ụbọchị na ụwa anyị, anyị enweghị ikike ịchịkwa ya. Yabụ na enwere ụdị mmalite nke ụbọchị na njedebe nke ụbọchị ma echere m na ọ bụrụ na ịchọrọ ịnọ na rhythms na cycles na nkwekọ na usoro, nke bụ ihe usoro a gbasara, mgbe ahụ ị ga-enwerịrị ụdị ofu ebe na 24 awa gị -Process. Ya mere, anyị na-achọ mgbe niile oge anyị ga-eteta, nke bụ ihe okike na usoro okike anyị, nke kwekọrọ na ụra ụra anyị Hanno, karịa oge ịmụrụ anya ọkachamara.
Yabụ ozugbo ị matara nke ahụ, ị ​​nwere ike igbasa ụbọchị gị na nkeji iri itoolu na ụkpụrụ ahụ ga-anọnyere gị ruo oge ndụ gị niile. Nke a bụ ihe na-atọ ụtọ, yabụ ọ bụrụ na m nweta ikike a, na oge m na-eteta mgbe ọ bụla bụ elekere 6:30 nke ụtụtụ na oge ụra m chọrọ bụ awa asaa na ọkara, nke ahụ ga-apụta ịlakpu elekere 11 nke ụtụtụ, nri? Nke ahụ ziri ezi.
Enweghị arụmụka na dịka mmadụ anyị chọrọ ihe dịka 30 gbakwunyere pasent nke ọ bụla 24 awa na steeti ụra ụra, asatọ n'ime awa 24, mana rue oge na-adịbeghị anya ụmụ mmadụ na-agụkarị oge niile, oge dị mkpirikpi karịa otu ngọngọ, nke mere na anyị anyị anaghị arụ ụka na oge ịkwesịrị iji gbakee, enwere ụzọ ọzọ ịme ya. Yabụ na ị kwenyere nke ọma, site na ịkpọte ịkpọ oku na elekere 6.30 nke ụtụtụ, ị ga-alaghachi azụ n'elekere ise nke ụtụtụ, elekere atọ nke ụtụtụ, elekere abụọ nke ụtụtụ, elekere abụọ nke ụtụtụ, elekere iri abụọ na atọ. na 11 elekere
Nke ahụ na-enye gị usoro nkeji ise nke iteghete gị na nke ahụ na-enye usoro gị kwa ụbọchị obere ụkpụrụ na ụda, mana ọ na -emepụta oge ihi ụra ọzọ, Hanno. Dị ka 12:30 elekere. na elekere abụọ nke ụtụtụ ma ọ bụrụ n’izu gị ma ọ bụ ọbụlagodi mgbe ị tetara ma ụbọchị gị enweghị njikwa, ị nwere ike iji oge ndị ọzọ maka obere oge wee ruo elekere 6:30 nke ụtụtụ, mana ị ga-ejikwa nlezianya na-eme kwa ụbọchị maka na anyị anaghị eme ya na-achịkwa ihe niile anyị chọrọ ime yabụ ịchọrọ ịdebe usoro na nkwekọ na oge ndị ahụ.
Dịkwa mma. Ajụjụ ikpeazụ m na nke a bụ gịnị ka m kwesịrị ime ma ọ bụrụ na m lọta n’azụ oge site n’oge ruo n’oge? M ga-ehi ụra karịa mgbe ahụ? Echere m na naanị ihe anyị mụtara site na nha anya ndị a kemgbe ọtụtụ afọ bụ na ọ bụrụ na ị lee anya, kwuo, ụbọchị asaa n'ihu gị, ị nwere ike ịhụ ihe izu gị dị, mana o doro anya na ị bụchaghị onye ọ bụla Lelee ụbọchị . Yabụ ọ bụrụ na ị nwere oge ndị ahụ, Hanno, nke ị rụtụrụ aka, mgbe ị laruru ụlọ mgbe e mesịrị, ị ga-ahọrọ ma ọ bụ 12:30 elekere. ma ọ bụ 2: 00 am, oge 90 ọzọ na-esote, na-anwa ịrapara n'ụkpụrụ ụfọdụ 'na-eme ya kama enweghị usoro.
Yabụ ọ bụrụ na ị tụfuo okirikiri ma ọ bụ abụọ, ị na-edebe otu oge iteta mgbe niile, mana ụbọchị niile ịchọrọ iche maka obere iwe na-ewe iwe na nkeji iri itoolu ọ bụla, naanị obere, pere mpe. I nwedịrị ike iche obere oge ohere enweghị uche, ntakịrị ihe anyị na-akpọ oge mgbake njikwa, ntakịrị ụra ka ndị mmadụ ga-akpọ ya. Anyị anaghị anwa ihi ụra, anyị na-eme obere obere ezumike, dị ka etiti ehihie ma ọ bụ na mgbede, yabụ ihe anyị na-anwale ma kwado mgbe anyị na-agagharị na 24 ọ bụla, anyị anaghị anwa ịrahụ ụra, anyị anaghị 'gbalịrị ịrahụ ụra n'oge mbụ ma ọ bụ ihi ụra mgbe e mesịrị, anyị na-anwa idebe ụda olu mara mma ma jiri isi ihe abụọ ọzọ nke ụbọchị wee kwado usoro mgbake anyị.
Daalụ, nke ahụ nyere nnọọ aka maka mmemme izizi anyị. Daalụ maka oge gị ma gwa gị okwu n'oge adịghị anya! Akwa, daalụ nke ukwuu, Hanno! Daalụ.
Gịnị ka oge ihi ụra pụtara?
Usoro ụrabụ akụkụ nke ime “clocks” anyị na-enwe mgbe nileihe nakawa etu esiụbụrụ ụbụrụ na-eme mgbe anyịhie ụra.Usoro ụrana-agbakarị nkeji iri itoolu na elekere abụọ, n'oge ụbụrụokirikirisi nwayọ-nwayọhie ụrakaREM ụranke anyị na-enwe nrọ.Bọchị 2 2019
Perhapsra nwere ike bụrụ ihe kachasị dị mma anyị nwere ike ime kwa ụbọchị iji weghachite ụbụrụ na ahụ anyị na ahụike. Ma site n’ịghọtakwutakwu ihe ụra bụ, ma eleghị anya, anyị nwere ike ịghọta ma oke ụra anyị na mma. (Music) Ya mere, gịnị bụ ụra? E kewara ụra ụzọ abụọ, ma ọ dịkarịa ala n’ime ụmụ mmadụ.
N'otu aka anyị nwere ụra anya na-adịghị ngwa ngwa ma ọ bụ ụra na-abụghị REM mana n'aka nke ọzọ anyị nwere anya ụra ngwa ngwa ma ọ bụ ụra REM. Ekpuwokwa ụra na-abụghị REM ka ụzọ anọ dị iche iche kewapụrụ, nke a na-amaghị nke ọma dịka usoro otu site na anọ, nke na-eme ka ụra gị buru ụra. Banye n'ụdị ìhè ndị ahụ na-abụghị ụra REM, obi gị na-amalite ịda, ọnọdụ ahụ gị ga-amalite ibelata ma ọrụ ụbụrụ gị nke ọkụ eletrik na-amalite ibelata.
Ma mgbe anyị bara n'ime miri emi, ọ bụghị ọhụhụ anya mmegharị anya, usoro nke atọ na anọ na-amalite, ugbu a na mberede ụbụrụ na-agbapụta nnukwu ebili mmiri a buru ibu, buru ibu. Ahụ bụ n'ezie na ebubo na usoro nke dịghịzi usoro. Anyị na-enweta ọmarịcha mgbanwe nke sistemu obi anyị.
N’ezie, ụra miri emi, nke na - abụghị REM n’elu ụbụrụ na - enyere aka ime ka ncheta dịkwuo mma ma doziekwa usoro nke ụbụrụ. Yabụ nke a abụghị ụra REM. Mana ka anyị gaa REM ụra, nke bụ ụdị ụra ọzọ.
Ọ bụkwa n'oge ụra REM ka anyị kachasị nwee ụdị nrọ pụrụ iche; ihe nkwalite ikuku nke ikuku na - amalite ime ngwa ngwa. N'oge ụra REM, anyị na-enweta ihe enyemaka ụfọdụ nke enyemaka mbụ. Nakwa n'oge ụra REM, ebe anyị na-enweta mmụba na ihe okike, a na-achịkọta ozi ka anyị nwee ike iteta n'ụgwọ maka nsogbu nsogbu ndị anyị nwere na mbụ.
Ọ bụrụ na anyị laghachite n'ụra ụra abụọ a, ọ na-egosi na Non-REM na REM ga na-alụ ọgụ maka ịda mba ụbụrụ n'abalị niile, na agha ụbụrụ ga-emeri ma tufuo kwa minit 90 ọ bụla, emesia ọ ga-eme 90 ọzọ Nkeji. Na ihe nke a na-emepụta bụ ụkpụrụ mmadụ na-ehi ụra na-ehi ụra, ọkọlọtọ nkeji 90. Mana ihe dị iche bụ ihe ndị na-abụghị REM na REM na-agbanwe n'ime oge nkeji 90 ahụ na-agbanwe ka anyị na-agafe n'abalị, yabụ na ọkara nke abalị ka ọtụtụ n'ime oge 90 nkeji na-ehi ụra miri emi na-abụghị REM ụra , kpọmkwem ọkwa atọ na anọ nke ndị na-abụghị REM.Ma ka anyị na-aga n'ihu na ọkara nke abụọ nke abalị, nke ahụ na-ahụ ka nguzozi na-agbanwe n'ezie, na kama nke ahụ ọtụtụ n'ime oge 90 nkeji na-eme nke ukwuu ngwa ngwa anya anya ụra ma ọ bụ nrọ ụra yana ụra nke abụọ na-abụghị ụra REM, ụdị ụra a nke ụra na-abụghị REM.
O wee pụta na ịghọta otu esi ahazi ụzọ ahụ nwere ihe ọ pụtara. Were onye na-ehikarị ụra n’elekere iri. ma teta n ’elekere isii nke ụtụtụ, ya mere ha nwere windo ụra awa asatọ.
Ma n'ụtụtụ a, ha ga-ebili n'isi ụtụtụ maka nzukọ ụtụtụ, ma ọ bụ na ha chọrọ iji nweta ụbọchị ka ọ bụrụ ezigbo mmalite iji gaa mgbatị ahụ. N'ihi nke a, ha ga-ebili n'elekere anọ nke ụtụtụ ma ọ bụghị n'elekere isii nke ụtụtụ.
Ego ole? Ihi ụra n’ezie? Aka elekere abụọ n’ime ụra abalị were awa asatọ pụtara na idazu ụzọ 25 nke ụra gị. Ee ee ee ee. Percent idafuola pasent 25 nke ụra gị niile, mana n'ihi na ụra REM na-abịakarị na ọkara nke abụọ nke abalị na ọkachasị n'ime awa ole na ole gara aga, ị tufuru ma eleghị anya 50, 60, ikekwe ọbụlagodi 70 nke ụra gị niile .
Yabụ ịghọta ihe ụra bụ na etu esi ahazi ụra nwere ezigbo mbibi ka anyị na-amụta ihe niile banyere uru dị iche iche nke ụra a na ọghọm ndị na-ezughi oke na mmemme ndị na-eso.
Kedu usoro nke 5 nke usoro ihi ụra?
Ndị na-agba ịnyịnya ígwè dị mma n’elu akwa?
Cygba ígwèegosila na ọ bụ ezigbo ụzọ dị ala iji belata nsogbu metụtara mmekọ nwoke na nwanyị, ọkachasị n'etiti ụmụ nwoke na-eru nso ma ọ bụ na etiti. 'N'ezie, ọ bụ uru aerobic na mmụba nke ọbara na-egosi na ọ ga-emeịgba ígwèihe nkwalite mmekọahụ maka ọtụtụ nwoke.
Ọ dị mma ihi ụra mgbe ịnyịnya ígwè gasịrị?
Ozugbo ị pụọigwe kwụ otu ebe, setipu, gbunye mmanu, ma hie ura. Zerehie ụra mgbe3 elekere, dị ka mgbede ehihie ga-egbochinanke gihie ụran'abalị. Mgbochi gị nwere ike isi ike ma ọ gaghị enwe oke mgbe ị tetara, mana obi gị ga-erite urusite naagbakwunyere ezumike.
ọnụ igwe kwụ otu ebe
Ihi ụra 3 ọ dị mma?
TO:Napsdikwa mma. Ma eleghị anya ị ga-achọụbọchịn'ihi na ihe na-erughị otuaka elekere, ma eleghị anya ị ga-achọụbọchịn'isi ụtụtụ, dị ka tupu elekere abụọ nke ehihie. ma ọ bụ3elekere Ọ bụrụ na ị nwere ike ike-ụbọchịmaka 15 ma ọ bụ 20 nkeji, nke ka mma.Nappingmaka iheaka elekerema ọ bụ ogologo na-abawanye ohere gị ị ịdaba ụra miri emi.Jul 31. Ọkt 2018
Ogologo oge hà a shouldaa ka usoro ihi ụra miri emi kwesịrị ịdịru?
N’abalị, mmadụ gafere anọ ma ọ bụ isiioge ụra1. 1. Ọ bụghị ha niileoge ụrabụ otu ogologo, ma na nkezi haikpeazụihe dị ka minit 90 ọ bụla.Ọgọst 14 2020
Ezigbo ụra 5 ọ dị mma?
Ego oleụra miri emiị chọrọ? Dabere na New Health Advisor, ndị okenye 18 na ndị okenye chọrọ ebe ọ bụla site na 1.5-1.8awa ụra nke ụrakwa abalị, nke bụ ihe dịka 20% nke mkpokọta gịhie ụra. Fọdụ ndị mmadụ nwere ike ịchọpụta na ha chọkwuru iheawankehie ụraiji nwee mmetụta zuru ike zuru oke ma were yaeziabalịhie ụra.Ọnwa Ise 15, 2017
Kedu oge ụra kacha sie ike iteta?
Ọ bụkasị sie ikekatetandị si na ngwa-ngwahie ụra; n'ihi ya a na-ewere ya dị ka nke kachasị mie emiogbo ụra. Na-eso oge oge nwayọ nwayọhie ụraOtú ọ dị, EEG ndekọ na-egosi nankebi uralaa azu iru onodu di iche nke anakpo anya ngwangwa, ma obu REM,hie ụra.